IMicrosoft yeWindows - ujikeleze wonke amashumi eminyaka
ikhaya/software/IMicrosoft yeWindows - ujikeleze wonke amashumi eminyaka
Vangelis18. Fe bruwari 2021
Inkqubo yokusebenza yeWindows esuka kwiMicrosoft iphuhlise yaba yimbaleki yokwenyani engamashumi eminyaka. Akunakwenzeka ukuba nomfanekiso kwihlabathi iikhompyutha ngaphandle kwayo. Into abangayaziyo abaninzi, nangona kunjalo, kukuba inkqubo yokusebenza ihamba nathi engaziwayo kwiimeko ezininzi zemihla ngemihla. Ngaba awucingi njalo? Emva koko funda!
1 Iqale njani yonke lento
2 IiATMs neeWindows
3 Ii-Smartphones ezineWindows
4 IWindows ikwezinye izixhobo ezininzi
5 Ulungile ukwazi
Iqale njani yonke lento
Inguqulelo yokuqala yeWindows yavela ngoNovemba 20, 1985. IWindows 1.0 ngelo xesha yayingenanto yakwenza nenkqubo yokusebenza yanamhlanje, kodwa nalapho yabonakaliswa kukunxibelelana komsebenzisi okhululekile. Emva kwezinye iimpapasho ezimbalwa, iMicrosoft iphumelele ngo-1990 nge-Windows 3.0 kunye ne-Windows 1992 eyalandela ngo-3.1. Kumashumi eminyaka alandelayo iWindows 95, iWindows 2000, iiWindows 7 kunye no-8 zilandelwe, kwaye yangoku 10 Windows. Kwakukho neenguqulelo ezikhethekileyo zeWindows ezazisetyenziswa kwiiseva, phakathi kwezinye izinto. Zininzi nezinye iindawo zesicelo esaziwa ngabantu abambalwa kuphela.
Ii-ATM ezininzi ziqhuba kwinkqubo yokusebenza yeWindows. IWindows XP, eyakhutshwa ngo-2001, isasebenza kwii-ATM ezininzi zaseJamani namhlanje, nangona inkxaso yeMicrosoft yapheliswa ngo-2014. Nangona kunjalo, uguquko lwachazelwa kwiminyaka embalwa edlulileyo ngabavelisi. Kwixesha elide, zonke ii-ATM ziya kuguqulwa zibe ziinkqubo zokusebenza njengangoku Windows 10.
IMicrosoft ikwafumene indlela eya kwii-smartphones ngenkqubo yeWindows yeWindows. Ukusukela ukuba iMicrosoft yasebenzisana nomvelisi we-Nokia ngowama-2010, inkqubo yokusebenza kaMicrosoft yafunyanwa emva koko kwii-smartphones zelo xesha. Emva kwempumelelo emodareyithayo, isoftware yeWindows yeWindows, esele ifikelele kuhlobo 8.1, yapheliswa ngoJulayi 2017.
IWindows ikwezinye izixhobo ezininzi
Kuba iiWindows zinokukhetha ezininzi Inkqubo kunye nokwenza iiapps kunye nesoftware ithandwa kakhulu ziinkqubo. Kwangelo xesha, ujongano lweWindows luyaziwa kwaye luyathandwa ngabasebenzisi kuba akufuneki batshintshe. Akumangalisi ke ngoko ukuba ezinye izixhobo ezininzi zisebenza kwinkqubo yeMicrosoft. Iinkqubo ezininzi ezisebenzayo ziqhubela enye okanye enye umatshini welding kunye nabanye oomatshini abakhethekileyo ekunzima ukubasebenza kwiinkqubo zokusebenza zeWindows. Kukwanjalo nakwinani elikhulu lezixhobo ezibizwa ngokuba zii-smart devices ngoku ezinokufunyanwa kumakhaya amaninzi. Iifriji ezikrelekrele nge Windows 2016 bezikwinqanaba lomenzi wesixhobo sekhaya uLiebherr ukusukela ngo-10. NgokukaMicrosoft, Windows 10 uqhekeze umda obalulekileyo ekuqaleni kuka-2020: IWindows isebenza ngaphezulu kwezixhobo ezibhiliyoni.
Ngelishwa, imidlalo emininzi yakudala kunye nokusetyenziswa akunakusetyenziswa okanye akusenakusetyenziswa ngokuchanekileyo kwiinguqulelo zangoku zeWindows. Nangona kunjalo, abaphuhlisi abanobuchule bayile enye okanye enye yokusebenza. Umzekelo, umdwelisi weenkqubo uFeliks Rieseberg ukwazile ukwenza ifayile Usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows Windows 95 ukuphuhlisa. Oku kuthetha ukuba iinkqubo ezindala ozithandayo kunye nemidlalo inokusetyenziswa kwiiPCs zangoku.
Uninzi lweePC zanamhlanje zithunyelwa zivela kumzi-mveliso ngeMicrosoft Windows. Ihardware iya isiba namandla ngakumbi kwaye ke ngoko iMicrosoft yeWindows iba lula ngakumbi kwaye inamandla ukusuka kuguqulelo ukuya kuguqulelo. Okwangoku Windows 10 ingaphezulu kokuchukumisa. Kuya kuba ngumdla ukubona apho inkqubo yokusebenza yeMicrosoft iza kusetyenziswa khona kwixa elizayo.
Khuphela iOpera 10.50
Yenza i-Intanethi Explorer 8 ngokukhawuleza
Ngokukhawuleza vula ibrowser entsha
Zama iWindows 7 yasimahla kwaye uyikhuphele ngokusemthethweni
Iseva yemeyile i-POP3 IMAP evela kubanikezeli nge-imeyile abaziwayo
I-CCleaner isoftware yokwenza inkqubo yasimahla
Khuphela iVLC Player yeWindows 8
Khuphela iThunderbird 3.1 RC
Khuphela iQela lokuBukela i-iphone
Kwiiyure eziyi-14 ezidlulileyo